Izinhlelo ezi-8 ezinhle kakhulu ze-webcam zeWindows, MacOS neLinux 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ungathola ezinye izigaba zezinhlelo ze-webcam emakethe. Ezinye izinhlelo zisetshenziselwa ukuhlola ikhamera ye-PC bese ubona ukuthi iyakuhambisa lokho okuthembisayo. Abanye banesiphakamiso esimnandi kakhulu futhi bafaka izihlungi kusithombe esithunjiwe. Kukhona nezinketho ezikuvumela ukuba urekhode konke okuboniswayo ukuze kubuyekezwe kamuva.
Ngezansi kunezinhlelo eziyi-8 ezinhle kakhulu ze-webcam zeWindows, MacOS, neLinux. Hlola!
I-ManyCam inikeza imisebenzi eminingi ewusizo yokubonisana ngevidiyo noma ukuqoshwa kwesifundo sevidiyo. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ubhale futhi udwebe esibukweni, engeza izithombe kuvidiyo, ufake ubujamo, phakathi kwabanye. Kungenzeka futhi ukuthi unameke isithombe kusuka kwikhamera yewebhu ngamafayela, ubonise isikrini sekhompyutha noma ikhamera yeselula.
Umsebenzisi usengenza ukulungiswa kombala, ukusondeza, ukushintsha ukukhanya, nokusebenzisa izihlungi ezimnandi nemiphumela. Kukhona futhi inketho yokusakaza bukhoma kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, njenge-YouTube, Twitch, ne-Facebook. Noma, uma uthanda, gcina okuqukethwe kuze kufike ku-720p enguqulweni yamahhala naku-4K enguqulweni ekhokhelwayo.
Ividiyo ingagcinwa kumafomethi athandwayo njenge-MP4, MKV, MOV, ne-FLV.
ManyCam (mahhala, nezinketho zezinhlelo ezikhokhelwayo ezinezici eziningi futhi akukho watermark): Windows 10, 8 no-7 | MacOS 10.11 noma ngaphezulu
I-YouCam wuhlelo olunikela ngamathuluzi wokusebenza nokudlala. Iyahambisana nezinsizakalo ezahlukahlukene zokushaya ividiyo nama-platforms wevidiyo abukhoma, inezihlungi zokwenza ubuhle ngesikhathi sangempela. Ingasaphathwa eyamakhulu yemiphumela engathandwa kwabathelisi esikubona.
Ngokuqondene nezethulo, umsebenzisi unezinsizakusebenza zokubhala amanothi, abeke ividiyo phezulu ngezithombe, abelane ngesikrini, phakathi kwabanye. I-interface yayo enobungani ikuvumela ukuthi uthole izici eziyinhloko kalula.
Uma ukhetha ukurekhoda, ividiyo ingagcinwa ezinqumweni ezihlukile, kufaka phakathi i-Full HD, kuma-AVI, WMV, namafomethi we-MP4.
Youcam (ikhokhelwe, isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30): Windows 10, 8, no-7
I-Webcam Test uhlelo oluku-inthanethi olukuvumela ukuthi uhlole imisebenzi enikezwa yikhamera yakho ye-PC ngendlela elula. Mane nje ufake iwebhusayithi bese ufinyelela inkinobho Chofoza lapha ukuvumela ukufinyelela kuzikhombi ze-webcam. Bese uye ku- Zama ikhamera yami. Ukuhlola kungathatha imizuzu embalwa.
Kungenzeka wazi idatha efana nokuxazululwa, isilinganiso sebhithi, inani lemibala, ukugqama, ukukhanya, phakathi kwabanye. Ngokungeziwe esivivinyweni esijwayelekile, umsebenzisi angahlaziya izici ezithile ezinjengokuxazululwa, isilinganiso sefreyimu nemakrofoni. Kukhona nenketho yokurekhoda ividiyo kuwebhusayithi uqobo bese uyigcina njenge-WebM noma iMKV.
Ukuhlolwa kwekhamera yewebhu (mahhala): Iwebhu
4. Ikhamera ye-Windows
IWindows uqobo inikela ngohlelo lwendabuko lwekhamera yewebhu. I-Windows Camera iyindlela elula kepha esebenzayo, ikakhulukazi kulabo abadinga imisebenzi eyisisekelo kuphela. Ngokusebenzisa imodi yochwepheshe kuzilungiselelo, kungenzeka ukuthi ulungise ibhalansi emhlophe nokukhanya.
Ukuhlala njalo kuzimele, uhlelo lokusebenza lunamamodeli wegridi. Kukhona nenketho yokushintsha ikhwalithi yevidiyo phakathi kwe-360p ne-Full HD nemvamisa, kepha njalo kuma-FPS angama-30. Imiphumela igcinwa ku-JPEG naku-MP4.
Ikhamera yeWindows (mahhala): Windows 10
5. Ithoyizi leWebcam
I-Webcam Toy iyisicelo esilula se-inthanethi sanoma ngubani ofuna izihlungi ezimnandi ukuthatha izithombe ngekhamera yewebhu. Vele uye kuwebhusayithi bese uqhafaza Silungile? Mamatheka!. Uma isiphequluli sivimba ukufinyelela, nikeza imvume yokusebenzisa ikhamera ye-PC.
Bese uchofoza inkinobho Normal ukulayisha yonke imiphumela etholakalayo. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo, kufaka phakathi i-kaleidoscope, isitayela sesipoko, intuthu, i-movie yakudala, ikhathuni, nokuningi. Khetha okuthandayo bese uya kusithonjana sekhamera ukuze ubhalise.
Umphumela ungagcinwa ku-PC noma wabelwe kalula ku-Twitter, Izithombe ze-Google noma iTumblr.
Ithoyizi leWebcam (mahhala): Iwebhu
6. Studio ye-OBS
Okungaphezulu nje kohlelo lwe-webcam, i-OBS Studio yaziwa ngokuhambisana kwayo nazo zonke izinsizakalo ezinkulu zokusakaza ividiyo. Phakathi kwazo, iTwitch, i-Facebook Gaming ne-YouTube.
Kepha kunjalo futhi ikuvumela ukuthi urekhode isithombe sakho sekhamera bese ugcine okuqukethwe ku-MKV, MP4, TS ne-FLV. Ukulungiswa kungahle kusuka ku-240p kuye ku-1080p.
Uhlelo lokusebenza futhi lunamathuluzi wokuhlela amaningana akwazi ukwenza ukuthi impahla yakho ibukeke inekhono. Phakathi kwazo kunezici zokulungiswa kombala, ingemuva eliluhlaza, ukuhlanganiswa kwesiteshi somsindo, ukunciphisa umsindo, nokunye okuningi.
Ucwaningo lwe-OBS (mahhala): Windows 10 no-8 | MacOS 10.13 noma ngaphezulu | I-Linux
I-GoPlay ingaba yindlela enhle yabaqalayo, kepha bafuna ukusuka ezisekelweni. Uhlelo luhlinzeka ngemisebenzi yokubhala esikrinini, kanye nokufaka izithombe. Amavidiyo angarekhodwa aze afike ku-4K kuma-60fps futhi ahlelwe kusihleli esakhelwe ngaphakathi.
Uhlelo lokusebenza lukuvumela ukuthi urekhode isikrini sakho se-PC futhi wenze amavidiyo abukhoma. Uhlobo lwamahhala lohlelo lokusebenza likuvumela ukuba urekhode amavidiyo wemizuzu engu-2 kuphela, ne-watermark. Umphumela ungagcinwa ku-MOV, AVI, MP4, FLV, GIF noma kumsindo.
Iya kudlala (mahhala, ngenguqulo ephelele ekhokhelwe): Windows 10, 8 no-7
8. I-Apowersoft Free Online Screen Recorder
I-Apowersoft Free Online Screen Recorder ilungele labo abadinga ukurekhoda isikrini se-PC ngenkathi bebuka isithombe se-webcam. Isayithi linikela ngezinsizakusebenza zokubhala mahhala kwesikrini futhi kufaka phakathi ubujamo Konke ku-inthanethi, kepha ngaphambi kokuthi uqale, udinga ukulanda ifayela le- rocket Sokuqalisa akukho PC encane.
Umphumela ungagcinwa kukhompyutha yakho njengevidiyo noma i-GIF, igcinwe efwini, noma yabiwa kalula ku-YouTube nakuVimeo. Isixazululo singasethwa njengeziphansi, eziphakathi noma eziphakeme.
Apowersoft Mahhala Online Screen mibhalo (mahhala): Iwebhu
Sebenzisa ifoni yakho njengekhamera ye-PC nge-Wi-Fi noma ngekhebula le-USB
Izicelo zokurekhoda isikrini sakho se-PC mahhala
Izinhlelo zokusebenza ze-spy ezisebenzisekayo